कहाँ चुक्यो मछिन्द्र ?- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कहाँ चुक्यो मछिन्द्र ?
माघ ४, २०७६ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — मछिन्द्रको लागि शुक्रबारको बिहानी नै शुभ भएन । टोलीका अधिकांश खेलाडी त्रिपुरश्वरकै होटलमा बस्छन्, उनीहरू करिब १ सय मिटर हिडेरै दशरथ रंगशाला प्रवेश गर्छन्, खेल्छन् । हिमालयन शेर्पाको टिम भने अभ्यास गर्ने मैदानको खोजीमा धुलिखेलमै बसेको छ ।
त्यहींबाट झन्डै २ घण्टाको बस यात्रापछि हिमालयन शेर्पा मैदानमा ओर्लने गर्दछ । अघिल्लो दिनदेखि निरन्तर परेको वर्षाले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा शुक्रबार मछिन्द्रविरुद्ध हिमालयनको दशरथ रंगशालामा तय खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सारियो । मछिन्द्रका लागि मैदानको दूरी बढ्यो, बस नै चढ्नुपर्‍यो । हिमालयन शेर्पालाई भने बाटो छोटियो ।
छोटिएको बाटो र माघे झरीबीच हिमालयन शेर्पाले शीर्षस्थानको मछिन्द्रलाई सातदोबाटोको ‘अर्टिफिसयल टर्फ’ मा २–० ले स्तब्ध पार्‍यो । यससँगै हिमालयन शेर्पाले यो लिगमा पहिलो जित रच्ने क्रममा मछिन्द्रको अपराजित यात्रालाई सातौं चरणमा आएर पूर्णविराम लगाइदियो । यसअघि एक गोलमात्रै गरेको हिमालयन शेर्पा थप गोलका लागि मछिन्द्रकै सामना गर्नुपर्‍यो । हरेक खेलमा गोल गर्दै आएको मछिन्द्रको त्यो क्रम सातौं खेलमा आएर रोकियो ।
विनोद गुरुङको क्रसमा मछिन्द्रका डिफेन्डर पिटर सेगुनले पहिलो मिनेटमै आत्मघाती गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पाले अनपेक्षित अग्रता लियो । सेगुनले हेडद्वारा ‘फ्लिक’ गरेको बल आफ्नै पोस्टमा जाली चुमेको थियो । अर्को गोलमा पनि सेगुनको ‘योगदान’ रह्यो । मैदानको मध्यभागबाट नीरज बस्नेतले प्रहार गरेको फ्रि–किकमा विजय श्रेष्ठले हेडद्वारा प्रहार गरेको बल सेगुनकै टाउकोमा लाग्दै गोलमा परिणत भएपछि २० औं मिनेटमै हिमालयन शेर्पाले २–० को अग्रता लियो ।
हिमालयन शेर्पाले दोस्रो खेलमा एपीएफविरुद्ध १–१ को नतिजा निकालेको थियो । त्यसमा त्रिदेव गुरुङले ४७ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यसयता हिमालयनले पहिलोपल्ट गोल गरेको हो । उनै त्रिदेवले २६ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल आन्द्रेस निआले नरोकेको भए हिमालयनले अझै ठूलो अग्रता लिन सक्थ्यो । क्यामरुनी फरवार्ड स्टेफेन निलम्बनमा रहे पनि हिमालयनले उनको अभाव खट्कन दिएन । टोलीले सुधारिएको खेल पस्कियो, जुझारु प्रदर्शन गर्‍यो ।
छैटौं चरणसम्म सबैभन्दा बढी १० गोल गर्ने गर्ने क्लब हो मछिन्द्र । हिमालयन शेर्पा पुछारमा रहेको सरस्वतीसँगै सबैभन्दा कम १ गोल गर्ने क्लब रहेको थियो । यो सबै हिसाब सातौं चरणको पहिलो खेलमै फेरियो । पहिलोपल्ट च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य बनाएको मछिन्द्र कहाँ चुक्यो त ?
‘लिगको सुरुदेखि नै हामीले प्रत्येक खेलमा पाएको मौकामा गोल गर्न सकेको छैन,’ यो लिगमा पहिलो हारपछि मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले भने, ‘झन सुरुमै गोल खाएपछि हामीलाई गाह्रो भयो । दोस्रो हाफमा पाएको मौकामा चुक्नु दुर्भाग्य भयो ।’ मनाङ मर्स्याङ्दी र थ्रीस्टारका नाम चलेका खेलाडीहरूलाई भित्र्याएको मछिन्द्रको समस्या नै ‘स्कोरिङ’ मा हो । यसलाई उसले सातौं खेलसम्म आइपुग्दा पनि सुधार गर्न सकेको देखिएन । प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘सेन्टर फरवार्ड रेजिन सुब्बालाई खेलाएको हो । उनलाई अभिषेक (रिजाल), सुजल (श्रेष्ठ), एडेलाजा सोमिडेसँग वान–टु गर्दै खेल्ने सिकाएका थिए । तर, उनी धेरै बाहिर (पेनाल्टी क्षेत्र पछाडि) आएर खेलिदिए । उनले सेन्टर फरवार्डको भूमिकामा खेल्न नसक्दा गाह्रो भयो ।’
मनाङविरुद्ध २–२ मा टुंगिएको खेलपछि भएको झगडामा संलग्न डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ, विजय धिमाल र दीपक राई २–२ खेल निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरूमाथि कारबाहीको अन्तिम खेल हो हिमालयनसँग । मिडफिल्डर हेमन गुरुङ अस्ट्रेलियामा छन् ।
‘यी चार खेलाडी हुँदा वैकल्पिक पनि राम्रो थियो । उनीहरू नहुँदा गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘निलम्बनमा परेका तीन खेलाडी अर्को खेलमा फर्कने छन् । त्यसैले पुलिसविरुद्ध पक्कै राम्रो हुनेछ ।’ देवेन्द्र नहुँदा उनले मिडफिल्डर आन्द्रेस निआलाई सेन्टरब्याकमा खेलाए । निआले राम्रै खेले पनि पिटर सेगुन फिक्का देखिए र त्यसको मूल्य मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पासँग चुकाउनुपर्‍यो । ‘डिफेन्समा देवेन्द्र नहुँदा पिटरले सुरुबाटै मन दिएर खेलेजस्तो देखिएन । त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुरुमा सहज रूपमा लिँदा गर्दा गोल खायो,’ उनले भने ।
प्रशिक्षक कटुवालले हिमालयन शेर्पाको प्रदर्शनको प्रशंसा पनि गरे, ‘उसले पहिलाभन्दा राम्रो खेल्यो । उनीहरूलाई जित्नैपर्ने थियो, हार्दा पनि खासै थिएन, एउटा राम्रो टिमसँग हार्‍यो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो भएर पनि राम्रो खेल्यो । मछिन्द्रले भन्दा एकदम राम्रो खेल्यो ।’ मछिन्द्र र एक खेल कम खेलेको आर्मीको १३–१३ अंक छ । आर्मी सोमबार च्यासलसँग कम्तीमा बराबरी नतिजा निकाल्दै शीर्षस्थानमा पुग्नसक्छ । मछिन्द्रको हारसँगै एक्लो अपराजित बनेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ (१२ अंक) पनि शनिबार थ्रीस्टारलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नसक्छ । थ्रीस्टार (१०) पनि चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध ३ अंक जोड्न सके उपाधि होडमा हुनेछ ।
‘आज भाग्य पनि लाग्यो, गेम पनि खेल्यो,’ हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक सन्जीव बुढोथोकीले भने, ‘मछिन्द्रले गोल खाएको लामो लामो फ्रिकिकमा हो । सातौं खेलमा आएर च्याम्पियनको दाबेदारजस्तो राम्रो टिमलाई जित्नु धेरै राम्रो हो । पहिलो हाफमै अग्रता लिएकाले हामीलाई मौका थियो ।’
उनले थपे, ‘अलि मिहिनेत गर्‍यो, त्यसमा लक क्लिक भयो, दुई गोल गरिहाल्यौं ।’ जित्ने अवसर नगुमाउनका लागि अग्रता लिएपछि रक्षात्मक खेलेको पनि उनले बताए । ‘मुख्य फरवार्ड एडेलाजा र मिडफिल्डर विशाल राईलाई रोक्ने योजनामा पनि सफल भयौं,’ उनले सुनाए, ‘६ खेलसम्म जित्न नसक्दा धेरै दबाब लिएको थिएन । सबैले रेलिगेसनबारे सोच्थे । एक दिन नतिजा (जित) ल्याउँछौं भन्ने आस थियो ।’
आर्मी र ब्रिगेड ब्वाइजसँग हारेको हिमालयन शेर्पाले पुलिस, एपीएफ, फ्रेन्ड्स र मनाङसँग बराबरी खेल्यो । पछिल्ला तीन खेलमा गोल नबेहोरेका हिमालयनका गोलकिपर किशोर गिरीले मछिन्द्रविरुद्ध पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । विशेषगरी दोस्रो हाफमा अभिषेक रिजाल, रेजिन सुब्बा र सुजल श्रेष्ठको प्रहारमा राम्रो बचाउ गरेका थिए । मनबहादुर तामाङको कप्तानीमा रहेको हिमालयनको डिफेन्स पनि संगठित देखियो ।
उपाधि होडमा अगाडि रहेका आर्मी, मछिन्द्र र मनाङविरुद्ध खेलिसकेपछि हिमालयनका प्रशिक्षक बुढाथोकीले भने, ‘मछिन्द्रको सबै पक्ष राम्रो छ, आक्रमण राम्रो छ, उसका १८ खेलाडी राम्रो छन्, जे पनि गर्न सक्छन् ।’ उनले एन्फा कम्प्लेक्सको खेलबारे भने, ‘मछिन्द्र धेरै राम्रो छ, हामीसँग मौका पाएको हो तर क्लिक गर्न सकेन ।’ प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:०५
प्रदेश १ लाई स्विस, सरकारको १ अर्ब अनुदान
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ
माघ ४, २०७६ देवनारायण साह
(मोरङ) — प्रदेश १ सरकारलाई स्विट्जरल्यान्ड सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिएको छ । स्विट्जरल्यान्डले ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत उक्त अनुदान दिएको हो ।
प्रदेश १ स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो । प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारको १ अर्ब र प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ रहेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता विकासका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षणका साथै प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्न सघाउने प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै विद्युतीय सुशासन तथा डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई संस्थागत गराउन पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । ‘कार्यक्रमलाई आवश्यक मार्गदर्शनका लागि मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहनेछ,’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १/१ जना र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि रहनेछन् ।’ कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा बन्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘प्रदेश १ संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा पहिले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गरी संघीय सरकारबाट पूर्वसहमति लिई प्राप्त अनुदान सहयोगले प्रदेश सरकारको समग्र क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस आधार निर्माण भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको अवधारणापत्र ०७५ साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी कात्तिक १५ मा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत स्विट्जरल्यान्ड सरकारसँग सहमति गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ चैत २१ मा स्वीकृत गरी संघीय सरकारमा पठाएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ मंसिर २३ गते स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्झौता भएको हो । नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत क्याप्लरले यो सहयोग नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी हुने दाबी गरिन् । ‘यसले प्रदेश सरकारको वैदेशिक सहयोग प्राप्तिको बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन् ।
एमसीसी ग्रान्ट मुलुकको आवश्यकता : अर्थमन्त्री
यसैबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिएको अनुदान मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वीकार गरिएको बताएका छन् । यसमा राजनीतिक विवाद गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व हो । मुलुकमा राजस्वको दायरा सीमित रहेकाले विदेशी सहयोग आवश्यक छ,’ खतिवडाले भने, ‘विदेशी सहयोग लिनेमा कहीँकतै राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा हस्तक्षेप हुँदैन ।’ विदेशी सहायता दिँदा दातृ निकायले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक, पारदर्शिता, वातावरणजस्ता सर्त राख्ने गरेको खतिवडाले बताए । ‘एमसीसीमा पनि त्यस्तै सर्त छन्,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले दिएको अनुदान निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता सर्त राखेकाले यसमा अनावश्यक राजनीतिक विवाद गर्नु हुँदैन ।’
अल्पविकससित मुलुकको सूचीमा नेपाल रहेकाले अनुदान पाउने अधिकार पनि भएको उनले प्रस्ट्याए । ‘अहिले नै विदेशी सहायता अस्वीकार गर्दा हतारो र प्रत्युत्पादक हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘पर्यावरणलगायत क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने देशबाट हामीजस्ता मुलुकले सहयोग लिनुपर्छ ।’
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०७:५८